နိုင်ငံတော်က ပေးအပ်တဲ့ သီဟသုဓမ္မသိင်္ဂီဘွဲ့ကို စိန်အပွင့်ရေ ၇၀၀၀ ဖြင့် ဖန်တီးထားတဲ့ စိန်အင်္ကျီနဲ့ တက်ရောက်ယူခဲ့သူ.. - 9style
ရိုက်ကူးရေးလုပ်ရင်း TikTok အတူဆော့ခဲ့ကြတဲ့ နေရဲနဲ့ခြူးလေးတို့ရဲ့ ချစ်စရာဗီဒီယို
အင်္ဂလိပ်ကျောင်းတက်ပြီး မြန်မာစကား မပီတော့ဘူးဆိုတဲ့ အုပ်စိုးခန့်
ဝမ်းနည်းစရာ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့ လူကြမ်းတွေအတွက်အောင်ခိုင် ရေးတဲ့စာ
မွေးနေ့မှာ ဝစီပိတ်မယ်သီလရှင်အဖြစ် သာသနာ့ဘောင်ထဲဝင်သွားတဲ့ မိုးဟေကို
နိုင်ငံတော်က ပေးအပ်တဲ့ သီဟသုဓမ္မသိင်္ဂီဘွဲ့ကို စိန်အပွင့်ရေ ၇၀၀၀ ဖြင့် ဖန်တီးထားတဲ့ စိန်အင်္ကျီနဲ့ တက်ရောက်ယူခဲ့သူ..
March 21, 2019 TjrxgWfzULaCgCdvDEနာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ
နိုင်ငံတော်က ပေးအပ်ချီးမြှင့်တဲ့ သီဟသုဓမ္မသိင်္ဂီဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သူတွေထဲမှာ အောင်သမာဓိရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးအောင်ဆန်းဝင်းရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ လ်ညးအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပေးအပ်ချီးမြှင့်ပွဲကိုတော့ စိန်အပွင့်ရေ ၇၀၀၀ နဲ့ဖန်တီးတီထွင်ထားတဲ့ စိန်အကျီင်္နဲ့ တက်ရောက်ယူခဲ့ကြောင်းကို အောင်သမာဓိရွှေဆိုင် ပေ့ခ်ျက ယခုလိုဖော်ပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်.။
Wow!!…စိန်အပွင့်ရေ ၇၀၀၀ ဖြင့် ဖန်တီးတီထွင်ထားသော အောင်သမာဓိရဲ့ “စိန် အ င်္ကျီ” …လှရက်နိုင်လွန်းတယ် <3 အောင်သမာဓိ စိန်အင်္ကျီရဲ့ Short Video လေးကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးဆန်းသစ်တီထွင်မှုအဖြစ်ကြည့်ရှု့ခံစားနိုင်စေရန် အောင်သမာဓိကိုချစ်တဲ့…ရွှေချစ်သူများအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပြီနော်…
စိန်အင်္ကျီတစ်ထည်လုံးရဲ့ ဖန်တီးမှုအားလုံးကို အောင်သမာဓိ စက်ပန်းထိမ်မှ မူပိုင်ထုတ်လုပ်ထားပြီး၁၅ ပဲရည် ရွှေ အစစ် ဖြင့် ဖန်တီးခတ်လုပ်ထားသောတော်ဝင်အနုပညာလက်ရာဆန်းတစ်ခု….” အောင်သမာဓိ စိန်အင်္ကျီ”
Creddit: aung thamardi
နိုငျငံတျောက ပေးအပျခြီးမွှငျ့တဲ့ သီဟသုဓမ်မသိင်ျဂီဘှဲ့ကို ရရှိခဲ့သူတှထေဲမှာ အောငျသမာဓိရှဆေိုငျပိုငျရှငျ ဦးအောငျဆနျးဝငျးရဲ့ ဇနီးဖွဈသူ လျညးအပါအဝငျဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒီပေးအပျခြီးမွှငျ့ပှဲကိုတော့ စိနျအပှငျ့ရေ ၇၀၀၀ နဲ့ဖနျတီးတီထှငျထားတဲ့ စိနျအကြီင်္နဲ့ တကျရောကျယူခဲ့ကွောငျးကို အောငျသမာဓိရှဆေိုငျ ပခြေျ့က ယခုလိုဖျောပွလာခဲ့တာဖွဈပါတယျ.။
Wow!!…စိနျအပှငျ့ရေ ၇၀၀၀ ဖွငျ့ ဖနျတီးတီထှငျထားသော အောငျသမာဓိရဲ့ “စိနျ အ င်ျကြီ” …လှရကျနိုငျလှနျးတယျ <3 အောငျသမာဓိ စိနျအင်ျကြီရဲ့ Short Video လေးကို မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ပထမဆုံးဆနျးသဈတီထှငျမှုအဖွဈကွညျ့ရှု့ခံစားနိုငျစရေနျ အောငျသမာဓိကိုခဈြတဲ့…ရှခေဈြသူမြားအတှကျ တငျဆကျပေးလိုကျပွီနျော…
စိနျအင်ျကြီတဈထညျလုံးရဲ့ ဖနျတီးမှုအားလုံးကို အောငျသမာဓိ စကျပနျးထိမျမှ မူပိုငျထုတျလုပျထားပွီး၁၅ ပဲရညျ ရှေ အစဈ ဖွငျ့ ဖနျတီးခတျလုပျထားသောတျောဝငျအနုပညာလကျရာဆနျးတဈခု….” အောငျသမာဓိ စိနျအင်ျကြီ”Creddit: aung thamardi
ချစ်သူရဲ့တောင်းဆိုချက်ကို မလိုက်လျောနိုင်လို့ လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
ညောင်ပင်သာ ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ​ဆေးမြှီးတိုများ….မှတ်​စု (ရှယ်ယူထားလို့ ပိုနေတယ်မရှိပါ)
ခပ်မိုက်မိုက် ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ဒယ်ဒီဖားကင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား Red Carpet Show တက်ရောက်လာတဲ့ သင်ဇာ
တစ်ပတ်စာ မနောမယဟောစာတမ်း ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့အထိ